आर्थिक लाभमा लिप्त भएको आरोपमा मन्त्री मातृका यादवका स्वकीय सचिव विष्ट हटाइए - Makalukhabar.com
आर्थिक लाभमा लिप्त भएको आरोपमा मन्त्री मातृका यादवका स्वकीय सचिव विष्ट हटाइए
मकालु खबर	 शनिबार, साउन ४, २०७६ २३:१८ मा प्रकाशित
साउन ४, काठमाडौं । उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले स्वकीय सचिव सन्तोष विष्टलाई हटाएका छन् । पद र शक्तिको दुरुपयोग गरेर आर्थिक लाभमा लिप्त भएको आरोपमा विष्टलाई हटाइएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । विष्ट कुनै बेला मातृका यादवले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी नामको पार्टीको विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष थिए । उनी मातृकाका विश्वास पात्र पनि भएकाले अवसर पाएका थिए ।
त्यसै कारणले मन्त्री मातृकाले विष्टलाई मायाँ गरेर स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेका थिए । मन्त्री फेरबदल हुने सूचीमा मातृकाको नाम नम्बर १ मा रहेको चर्चासँगै मातृकाको सचिवालयबाट विष्टको बहिर्गमन भएको छ । विष्टसँगै अन्य २ जना सचिवालय सदस्य पनि हरुको श्रोतको भनाई छ ।
मातृका यादव आफ्नो कार्य सम्पादनमा सफल हुन नसक्नुमा स्वकीय सचिव विष्टको मुख्य भूमिका रहेको निष्कर्ष पछि सचिवालय फेरबदल भएको स्रोत बताउँछ । स्वकीय सचिव भएदेखि नै मन्त्री मातृका यादव बदनाम हुँदै जाने विष्ट भने मालामाल हुँदै जाने अवस्था आएको मन्त्री निकट एकजना सहयोगीले बताए । सचिवालयमा विष्ट सम्हालेको रिक्त स्थानमा देवशरण यादव बिक्रान्त लाई ल्याइएको खबर छ ।
बिक्रान्त विगतमा मातृका यादवले मूलधारबाट छुट्टिएर गठन गरेको नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य रहेका थिए । उनी कानून व्यवसायी पनि हुन् । आफ्नो सर्कलमा स्वच्छ छवि बनाएका भनिएका बिक्रान्त नेकपामा राम्रा कार्यकर्ताका रुपमा परिचित भएको तराई मधेशमा चर्चा हुने गर्दछ ।
बिक्रान्तको नेतृत्वमा चल्ने सचिवालयले उद्योग मन्त्री मातृका यादवलाई मन्त्री फेरबदलको डेन्जर जोनबाट सेफ जोनमा ल्याउन सक्ला ? त भनेर मन्त्रालयमा यति बेला चर्चा हुन थालेको छ ।
फेरिएन ‘घुस्याहा’ प्रवृत्ति : कहाँका कर्मचारीले को मार्फत खान्छन् घुस ?
चितवनमा ३५ करोडमा क्रुज शिप बन्दै, दशै अगाडी क्रुजिङ गर्न पाउने